Heshiisyadii La Dhamaystiray Saacadihii Ugu Danbeyeay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ay Caawa Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
July 17, 2019 Mahamoud Batalaale
Fiid wanaagsan ama xili kasta oo aad joogtaan oo wanaagsan kuna soo dhawaaada wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub caawa ka qoreen.
Ciyaartoy badan ayaa suuqa kala iibsiga looga hadlayaa iyada oo kooxaha Premier Leugue uu ku soo yaraanayo waqtiga ay haystaan si ay saxiixyo u sameeyaan maadaama oo suuqa England uu ka hor xidhmi doono horyaalada kale.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobnay wararkii ugu danbeeyay iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub ka qoreen caawa.
RASMI: Kooxda sida layaabka leh isku hubaynaysa ee Atletico Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixda difaacii kooxda Tottenham ee Kieran Trippier. Atletico Madrid ayaa 20 milyan ka bixisay Kieran Trippier oo waqti lala xidhiidhinayay kooxaha Juventus iyo Bayern Munich isaga oo saxiixay heshiis saddex sanadood ah.
RASMI: Kooxda AS Roma ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo saxiixatay xidigii kooxda Atalanta ee Gianluca Mancini oo 23 sano jir ah. Roma ayaa marka hore amaah kula soo wareegtay Gianluca Mancini laakiin waxaa waajib ku ah in ay heshiiskiisa mid rasmi ah ka dhigi doonto.
RASMI: Kooxda West Ham United ayaa heshiis rekoodh ku ah suuqa kala iibsiga kooxdeeda waxay qandaraas shan sanadood ah kula soo wareegtay xidigii kooxda Eintracht Frankfurt ee Sebastien Haller oo waqti loo arkayay in uu noqonayo badalka Lukaku ee Man United. West Ham ayaa 50 milyan yuro xidigan kula soo wareegtay.
Bayern Munich ayaa dalab rasmi ah ka gudbinaysa mid ka mid ah da’yarka Spain ugu fiican ee Marc Roca oo ka tirsan kooxda Espanyol kaas oo heshiiskiisa lagu burburin karo €40 milyan yuro. Bayern ayaa doonaysa in halkii ay lacagta heshiiska Roca lagu burburin karo ay bixin lahayd in ay wada xaajood la furto kooxdiisa Espanyol.(Sky Sports)
ManUnited ayaa doonaysa in ay la soo saxiixato 16 sano jirka Florent Da Silva oo ay ka doonayso kooxda Lyon iyada oo ay wararku sheegayaan in ay dalab deg deg ah United da’yarkan ka gudbin doonto.(L’Équipe)
Real Madrid ayaa doonaysa in ay ka takhalusto xidigaha aan qorshaha Zidane ku jirin ee Gareth Bale, James Rodriguez iyo dhawr xidig oo kale iyada oo Los Blancos doonaysa in ay lacag ilaa 200 milyan yuro ah ka urursato si ay ugu maal galin karto saxiixa Pual Pogba. (AS)
SIDOO KALE AKHRISO: UGU DAMBAYN - PSG Oo Iska Caabintii Ka Baxday Aqbashayna Shuruudii Ugu Weyneyd Ee Ay Barcelona Ku Doonaysay Neymar & Waxa Ka Cusub Wada Xaajoodka Labada Dhinac.
Arsenal ayaa wali sugaysa saxixia xidiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid iyo xulka da’yarta Spain ee Dani Ceballos iyada go’aan laga sugayo Zinedine Zidane, waxayna Gunners doonaysaa in ay xidigan amaah kula soo wareegto. (Sky Sports News)
Maqnaanshihii Romelu Lukaku ee kulankii ay kooxdiisa Manchester United la ciyaartay kooxda Leeds United waxa uu bilaw yahay hanaanka uu kaga baxayo kooxdiisa United. (Sky Sports News)
Kooxda Everton oo suuqa ugu jirta gool dhaliye tayo sare leh ayaa xiisaynaysa Mario Mandžukić waxayna sugayaan haddii uu xidiga reer Croatia mustaqbal ku leeyahay qorshaha tabbare Maurizio Sarri ee kooxdiisa Juventus. (Telegraph)
Wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola ayaa halkiisa ka sii wata ololaha uu ku doonayo in uu xidiga reer France kaga saaro Manchester United wuxuuna cadeeyay in ayna wali dhamaan arinta suuqa ee Pual Pogba.(Marc)
Da’yarka kooxda Chelsea ee Daishawn Redan oo 18 sano jir ah ayaa qarka u saaran in uu ku biiro kooxda Hertha Berlin oo £5 milyan yuro ka bixin doonta. (Daily Mail)
SIDOO KALE AKHRISO: Waa Kuma Xiddiga Man United Ee Gool Kasta Uu Dhaliyay Uu Qiimihiisa Yahay 8.2 Milyan Haatana Amaah Ku Baxaya?
Wariyaha aadka loo ixtiraamo ee Laurent Hess ayaa sheegay in kooxda Arsenal ay ugu danbay ku guulaysatay tartankii loogu jiray saxiixa difaaca kooxda St Étienne ee William Saliba waxayna Gunners xidigan ku helaysaa dalab 30 milyan yuro ah oo lagu daray lacago bandhigiisa ku xidhnaan doona laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in Saliba uu amaah ku joogi karo St Étienne iyada oo warka kama danbaysta ah la sugayo.
Maamulka kooxda Inter Milan ayaa dib u soo cusboonaysiiyay xiisihii ay xagaagii hore ku doonayeen xidiga kooxda Real Madrid ee Luka Modrić iyaga oo wakiilkiisa kulan la yeeshay waxayna kala hadleen haddii Modric ay fursad u heli karaan. (Di Marzio)
Neymar Jr ayaa doonaya in xagaagan uu qiimo kasta oo ay ku kacayso kaga baxo kooxdiisa Paris Saint-Germain isaga oo wax walba u samayn doona sidii uu Barcelona ugu laaban lahaa. ( Mundo Deportivo)
La soco wararka soo kordha iyo heshiisyada la dhamaystiro saacadaha soo socda